Soogalootiga reer suuriya oo ku faraxsan go'aankii hayadda socdaalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay tisdag 3 september 2013 kl 14.58
Hayadda socdaalka ayaa go’aan ku gaartay in dhammaan la siiyo sharci-deggenaansho oo joogto ah suuriyiinta magan-gelyada dalkan ku yimaada. Go’aankaa ayaa dalka Iswiidhen ka dhigaya midkii ugu horeeyey ee waddammada EU oo qaxootiga suuriyaanka siiya deggenaansho joogto ah iyo iney qaraabadood keen-san karaan.
Kefhat Hasan wuxuu Iswiidhen ku sugnaa muddoo saddex sannadood cagacageeynaysa, isaga oo muddo iminka laga joogo sannad iyo bar hortii la siiyey sharci deggenaansho oo ku meel gaar ah. Hase yeeshee aad ugu farax-san maanta in hayadda socdaalku gaartay go'aankeeda inkastoo ey muddo qaadatay, isla-markaana ey suuriyiin badani dagaaladda sokeeye ku geeriyoodeen muddadaa, sida uu sheegay Kefhat hasan:
- Aad iyo aad ayaan ugu farax-sanahay go'aanka hayadda socdaalka. Inkastoo go'aankaa la gaarey kadib weerarkii hubka kiimikada ee dalkaasi ka dhacay, eyna ku geeriyoodeen dad fara badan. Waxaan hubaa iney dadyoow badani dhoowrayeen go'aankaa. Waxaan un ka jawaabi karaa saaxiibadeyda dalka igula sugan ee aannu isku wakhtiga nimid ee weli fileya iney helaan sharciga deggenaansho.
Kefhat Hasan, wuxuu u dhashay qowmiyada Kurdida, wuxuuna ka soo jeedaa magaalada Qamishli oo dhacda waqooyiga dalka Suuriya. Halkaasi oo uu ku sugan yahay wiilkiisii oo siddeed jir ah oo la nool ayeeyadii aabbe. Go'aanka ay gaadhay hayadda socdaalka ayaa u suurtagelinaya Kefhat Hasan inuu wiilkiisa la midoobo, hase yeeshee u baahan yahay in marka hore si tuuga-nimo leh lagu soo geliyo dalka Turkiga oo ay ka howl-gasho safaaradda uu dalkani ku leeyahay magaalada Ankara:
- Dhammaan waddooyinka ka soo baxa dalka Suuriya maanta waa kuwo mukhalisiin ey isticmaalaan. Way adkaan doontaa in si tuuga-nimo leh looga soo saaro dalka, hase yeeshee uma adkaan doonto sida xaaladda dagaal ee dalkaasi ka aloosan.